Qadiimiga Ghostwriter | Ha loo qoro waraaqo waraaqo ah
, 09: 50
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga taariikhda
Inta lagu jiro daraasadaha qadiimiga ah, helitaanka qodista ayaa la baarayaa lana falanqeynayaa. Ujeeddada mawduucan waa in jawaabo loo helo su'aalaha la xiriira ilbaxnimooyinkii hore iyo kuwii hore. Koorsada waxaa shardi u ah inaad ka heshay Latinum dugsiga. Xitaa way ka sii fiicantahay haddii aad sidoo kale jeebka ku haysato Graecum. Laakiin taasi kuma filna. Waa inaad awood u leedahay inaad ku hadasho oo aad qorto Ingiriisiga. Luuqad kale oo shisheeye oo casri ah - Isbaanish, Talyaani ama Faransiis - waa faa iido weyn. Darajada qadiimiga ah waxay bixisaa laba darajo: Bachelor iyo Master-ka. Ilaa Bachelor koorsadu caadi ahaan waxay qaadataa lix semestar oo loogu talagalay Master-ka waxaad u baahan tahay seddex ilaa afar semestar oo dheeri ah. Waxyaabaha koorsada aasaasiga ahi badanaa waa:
Taariikh hore iyo taariikh hore
Qadiimiga ah ee qadiimiga ah
Qadiimiga Christian iyo
Semestarada soo socda, waxaa jira meelo dheeraad ah oo diiradda la saarayo sida B.:
Taariikhda bulshada iyo militariga
Ma jiraan wax xad xad juquraafi ah, maadaama hadhaagii dhaqammadii hore laga heli karo adduunka oo dhan. Tani waa sababta dalxiisyadu ay sidoo kale suurtogal ugu yihiin adduunka inta lagu jiro barashadaada si aad u awood ugu yeelato inaad ku dhaqan geliso wixii aad ka soo baratay qodista dhabta ah. Ka shaqeynta kumbuyuutarka sidoo kale waa lagama maarmaan koorsadan.
Qadiimiga ah waa in si cad looga soocaa cilmiga taariikhda. Arkeoloji waxay raadisaa horumarka aadanaha, paleontology waxay raadisaa fosilka, haraaga noolaha ka soo jeeda jiyoolojigii hore.
Dalbo hadda lacag!
Shaqo badan oo hordhac ah waa in la sameeyaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale qoraa si dhakhso leh ayuu uga bixi doonaa mowduuca. The Bachelor iyo shahaadada waxaa lagu dhammaystiri karaa dadaal badan.
Qoraal-gacmeedka qorista ee qadiimiga ah
Arkeoloji ee cilmi baarista
Markaad qalin jabiso, waxaa jira siyaabo fara badan oo aad ku raadsan karto xirfad sayniska tacliimeed, tusaale ahaan.
Rajada xirfadeed ee shahaadada cilmiga arkeoloji
Himilooyinka shaqadu markay qalin jabiyaan ka dib Master-ka-dhamaystirka iyo Gudbinta - waa in loo kala saaraa inay yihiin kuwa wanaagsan. Dhaqtarnimada badanaa shuruud ayey u tahay shaqooyinka aadka loogu baahan yahay. Dabcan, cilmi baarista iyo baridduba wey ka horreeyaan. Laakiin maamulka dowladu sidoo kale wuxuu siiyaa jagooyin aqoonyahannada qadiimiga ah (hay'ad dhisme). Meelo shaqo oo dheeri ah ayaa ku yaal
Daabacaadda ama gudaha
Barashada cilmiga qadiimiga ah iyo cawaaqibka ka dhalan kara
Annaga oo ah shirkad qoreysa qoraalkeena, waxaan diyaar u nahay inaan ku caawinno. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail. Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad codsato mid wicitaan bilaash ah waqti adiga kugu habboon.
Hubinta tayada ee berrinkii hore